Bum Simulator: isina pekugara hupenyu simulator | Linux Vakapindwa muropa
Taona mitambo inoshamisa nekuda kwenzira yavanotambwa nayo, mitambo yemavhidhiyo iyo yatishamisa nekutendeuka kwenyaya, dzimwe dzichishamisa nekuti isu hatisi magamba, asi vanhu vakaipa, zvakare vamwe indie vane magadzirirwo akanaka, asi vasina kupokana iyo iyo Nhasi yatinounza yakasarudzika yemusoro wakasarudzwa. Yakatumidzwa zita Bum Simulator uye anonyepedzera kuva sehupenyu hupenyu kune asina pekugara anorarama zuva nezuva mumugwagwa.
Mutambo une chiyero chekusviba uye kwechokwadi chauchazokwanisa kuwana mune chinguva pachitoro cheValve, Steam. Uye ndine chokwadi chekuti mushure mekuiridza, chimwe chinhu chinoshanduka mumusoro mako nekuratidza hupenyu hwezuva nezuva hwevanhu vasina pekugara hwakaita. Iwe ungango chinja maonero ako nezve vanhu ava, asi chokwadi hazvikusiye usina hanya. Ichokwadi ndechekuti inokwezva kutarisisa kwakawanda, zvekuti inoita kuti unzwe kupokana mazano. Kune rimwe divi zvinogona kutaridzika kunge zvinonakidza kubva pane akati wandei zvinhu, asi kune rimwe racho zvinogona kuita zvechisimba ...
Kunyangwe chokwadi chiri chekuti haigone kuve yakaipisisa kupfuura zviuru zvemitambo yemavhidhiyo yechisimba kwaunouraya kuruboshwe uye kurudyi sechinhu. Chokwadi ndechekuti hunhu hwemavhidhiyo mazita emitambo, kana ikatongwa, haina kutaridzika zvakanaka. Asi sekutaura kwangu, zvinogona kuve zvinonakidza kugona kuongorora, kunyangwe munzira chaiyo, izvo vanhu ava zvavanofanira kupfuura nazvo muhupenyu hwavo uye nematambudziko avanazvo, saka zvinogona kunge zviri zvekudzidzisa.
Pakati pezvinhu zvaunogona kuwana, chichava a hunhu husina pekugara kuti iwe unofanirwa kudzora kuti urarame, uwane matambudziko eguta uzvikunde, gadzirisa zvimwe zvakavanzika, uye ugare nematambudziko edoro ... Zvakanaka, ichauya muna Gumiguru nerutsigiro rweLinux uye panguva ino iri kuzadzisa zvese zvainovimbisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Bum Simulator: isina pekugara hupenyu simulator
Anoda kuziva mutambo. Izvo hazvizovapo mu .DEB fomati?